साबधान ! के तपाइलाई थाहा छ ? यो भिडियो किन बन्यो रातारात भाईरल ? थाहा पाउदा दुनिया चकित – Jagaran Nepal
साबधान ! के तपाइलाई थाहा छ ? यो भिडियो किन बन्यो रातारात भाईरल ? थाहा पाउदा दुनिया चकित
काठमाडौ । तपाइ हामीले वजारवाट किनेर ल्याउने तरकारी कति सफा हुन्छ होला अनुमान लगाउन सकिन्न । हालै एक भिडियो भाइरल भएको छ जसमा एक जना ब्यापारी नालीको पानीमा धनिया धुँदै गरेको देखिएका छन् ।
नालीको फोहर पानीमा धनिया धुँदै फेला परेका यि युवकलाई कसैले भिडियो बनाएको पनि कुनै मतलब छैन । नेपालीहरुको मुख्य बजार भारत हो । भारतवाट टन का टन तरकारी नेपाल भित्रन्छ । तर नेपाल आउने ति तरकारी कति फोहर होलान यो भिडियो हेरेर अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ ।
यो भिडियो भारत मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालबाट आएको हो, जसका कारण मानिसहरु छक्क परेका छन् । तरकारी बेच्ने एक व्यक्तिले नालीको पानीले धनियाँ धोइरहेको देखेपछि एक व्यक्तिले उनको भिडियो बनाए । भिडियो बनाउने तरकारी बिक्रेताले यो भिडियो देखाउँदै भने तिम्रो यो भिडियो हेरेर कसैले तिम्रो तरकारी किन्दैन । तर उनको त्यो कुराले ब्यापारीलाई केही असर गरेन ।
यो भिडियो भाइरल भएपछि भोपाल जिल्ला प्रशासनले ध्यानाकर्षण गरायो । लगत्तै तरकारी बिक्रेता विरुद्ध मु द्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला कलेक्टर अविनाश लावनियाको ट्वीटर ह्यान्डल भिडियोमा ट्याग भएपछि कारबाही गरिएको हो ।
यसपछि कलेक्टरले प्रहरी, नगरपालिका र खाद्य विभागलाई घटनाको छानबिन गरी दो षी पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका थिए । बिक्रेताको पहिचान भइसकेको र उनको फोन नम्बर र नाम ट्रेस गरिएको प्रहरीले मंगलबार जनाएको छ । यद्यपि उनको फोन स्वीच अफ थियो । त्यतिन्जेलसम्म खाद्य विभागले आरोपीविरुद्ध हनुमानगञ्ज प्रहरी चौकीमा एफआईआर दर्ता गरेको थियो।